Bemhapemha Grade Mica Powder, zvizorwa Grade Mica Powder, Pearlescent Mica Powder - Huajing
Inonyanya kushanda mukugadziriswa kwakanaka kweasina-esimbi ores, kusanganisira yakasikwa mica, synthetic mica, zvinoshanda zvicherwa, nezvimwe.
Cosmetic Giredhi - Natural Muscovite Mica Powder
Kupfeka Giredhi - Phlogopite Mica Powder
Maindasitiri Kuvaka Giredhi - Yakavezwa Mica Powder
Plastic Giredhi - Yakagadzirwa Mica Powder
Plastiki Giredhi - Phlogopite Mica Powder
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., yakavambwa muna 1994, ine nhoroondo yemakore makumi maviri neshanu kusvika pari zvino. Iri basa rekugadzira-rinotungamirwa kunyanya mukugadziriswa kwakanyanya kwesimbi isingasanganisirwe inosanganisira mica yechisikigo, micheka yekugadzira, zvinoshanda zvicherwa nezvimwe.Huajing inopa mhinduro dzepasirese dzakanangana neanoshanda emamineral-tech, epamusoro-mashandiro ekushandisa, pakati payo iyo mica inogadzira inovhara iyo yakazara upfu kirasi dzakateedzana. Iyo kambani yakagadzika maviri ekutsvagisa nekusimudzira nzvimbo munzvimbo dzakasiyana, inova yekupa yakasimba tekinoroji rutsigiro kune ese maindasitiri ekugadzira uye cosmetic base zvinhu.
Huajing ine timu yehunyanzvi yenhengo dzinosvika zana dzakatsaurirwa kugadzirwa uye kugadzirwa kwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro kubva kumika uye zvimwe zvigadzirwa zvemamineral.
Iyo kambani inonamatira kuchirongwa chemhando yepamusoro uye kusimudzira kusimudzira uye inotora yesainzi uye tekinoroji hunyanzvi seyayo yepamberi yemakwikwi.
Iyo kambani ine maviri maR & D nzvimbo munzvimbo dzakasiyana kuti ipe yakasimba tekinoroji rutsigiro rwekugadzira maindasitiri uye zvipfeko zvekutanga zvinhu.
Mukugadzirwa kweyakagadzirwa mica, kushandiswa kwemaminerari anoshanda ane mukana wehunyanzvi hwekushandisa
Zvekuvakisa uye Mapfekero
Rwazvino ruzivo nezve edu nhau
Huajing inoomerera kune epamberi manejimendi sisitimu pfungwa
Yayo fekitori manejimendi yave ichitevedzera ISO9001: 2015 mhando manejimendi sisitimu, ISO14001: 2015 ...
152021 / Ndira
Chokwadi nezve enviro ...
082020 / Gunyana
Kubudirira uye kunyorera ...